TOAMASINA : Voakina fatratra ny talem-paritry ny polisy sy ny kaomisera Bazary Kely
Miaina andriran’antsy tanteraka ny mponina ao Toamasina. Tao anatin’ny iray volana sy tapany, dia fanafihana mitam-piadiana maro no heno. 10 mai 2019
Fanafihana izay nisy namoizana ain’olona. Iray amin’ireny ny tao amin’ny Cité Nouvelle Ville izay namoizana raim-pianakaviana iray, ny alin’ny alakamisy 18 avrily. Ny talata 30 avrily, tovovavy iray sahabo ho 25 taona no voendaka finday sady novonoina. Tranga niseho tao Andranomadio parisela 11/42 io. Tsy vitany mandroba fotsiny ireo olon-dratsy fa sady mamono mihitsy.
Ireo vakitrano efa tsy lazaina intsony. Tao amin’i Cité Canada mialohan’ny fetin’ny paka, telo andro nisesy ny vakitrano. Eo koa ny firongatry ny fanendahana. Toy ny teny Ankirihiry, bazary Ambolomadinika...Ny antoandron’ny alarobia 8 mey, niaraha-naheno ilay fanafihana ny Accès Banque tao Bazary Kely. Tsy mifidy fotoana sy toerana intsony ireo jiolahy ary hita fa mampiseho tanjaka. Mihantsy ady amin’ny mpitandro filaminana. Manome karazana hafatra ho an’ny mpitandro filaminana ireo jiolahy ao Toamasina fa izy ireo indray no tompon’ny tanàna.
Ny alin’ny alarobia 8 mey io ihany dia olona roa no naratra tao amin’i Dépôt Analankininina. Tokantrano iray no norobain’ny jiolahy. Niezaka nanohitra ny tompon-trano. Nampiasa famaky ireo olon-dratsy ka nahatrarana olona roa.
Manoloana ireo zava-misy rehetra ireo, olona maro ao Toamasina no maneho ny heviny. Voakina fatratra ny talem-paritry ny polisy Toamasina sy ny Kaomisera ao Bazary Kely.
Momba ilay fanafihana nahazo ny “Accès Banque”, dia samy tsy lavitra ny polisy boriborintany voalohany sy ny kaomisaria bazary kely no misy ilay banky. Manodidina ny 500 m eo ho eo anefa dia sahin’ireo jiolahy notafihina.
Tsikaritry ny mponin’i Toamasina fa na ireo toerana nisy polisy manara-maso filaminana taloha, dia lasa tsy nisy ankehitriny. Iray amin’izany ny eo amin’ny Tranosoa Bazary Kely sy eny amin’ny Maison de retraite. Mampitaraina ny olona mila vonjy ihany koa ny tsy fandraisan’ny kaomisera ao Bazary Kely antson’olona mila vonjy rehefa amin’ny alina.
Nanomboka ny alakamisy 9 mey taorian’ilay fanafihana nahazo ilay banky tao Bazary Kely vao nikoropaka ny talem-paritry ny polisy ao an-toerana nanome baiko ireo polisy rehetra mba hidina hanara-maso eny an-dalana sy any anaty lalam-pasika rehetra any.